စုစုြေိံး ပၝ၀င်သည့် ဆိံ္ဋူပပြဲိံငြ့် အူခားသတင်းကောက်ိုံတ်ခဵက်မဵား | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
HomeMoeMaKa PRESS !!!
←ူမန်မာူပည်အရေး တောင်းဆိုမဆြိံ္ဋူပပြဲ ဆန်ဖရန်စင်္စကိုတငြ်ူပလြုပ်	၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားလူငယ်မဵား – ၈ လေးလုံး Part 1 →	စုစုြေိံး ပၝ၀င်သည့် ဆိံ္ဋူပပြဲိံငြ့် အူခားသတင်းကောက်ိုံတ်ခဵက်မဵား	29
စုစုြေိံး ပၝ၀င်သည့် ဆိံ္ဋူပပြဲိံငြ့် အူခားသတင်းကောက်ိုံတ်ခဵက်မဵား
ူမန်မာသတင်းဆက်သယ်ြရေး (BIT) မြ
ုသဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၀၇
၂၀၀၇ ခိုံစြ်၊ုသဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေႚ ရန်ကုန်မြာူဖစ်ပြားခဲ့တဲ့ ဆိံ္ဋူပပြဲ သတင်ူးဖစ်စဉ် အကဵဉ်းနဲႚ လပ်ြရြားမြ ဓာတ်ပုံ တေကြို စုဆောင်း တင်ူပ ပေးလိုက်တာူဖစ်ပၝတယ်။
ဓာတ်ပုံ – ဒီဗီဘြီ။
လောင်စာဆီစေဵူးပန်ခဵပေးရေး ဆိံ္ဋူပပြဲ လပ်ြရြားမြ ဒိုင်ယာရီ (၂၀၀၇ ခိုံစြ်၊ုသဂုတ်လ ၂၈ ရက် အဂဿၝနေႚ) လူ ၁၅ ဦးလောက်က မနြ်းလြဲ ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ် ခန်ႛမြာ ကမာ႟တ်္ဘြမြိႚနယ် လညြ်းတန်းစေဵး ရြေႚကစ္ဘပီး လမ်းလ္တွောက် ဆိံ္ဋ ထုတ်ဖော်ပြဲူပလြုပ်ုကတယ်။ အဲဒီနောက် လညြ်းတန်း မီးပြိငြ့်၊ လညြ်းတန်း မီးပြိငြ့် ကနေ အင်းစိန် လမ်းမ ဘက်ကို ဆက်လက် ခဵီတက် လာရာ၊ အင်းစိန် လမ်းမ ပေၞမြာ မစုစုြေိံး ဦးဆောင်တဲ့ လူအခဵြိႚ လာရောက် ပူးပေၝင်း္ဘပီး ဆက်လက် ခဵီတက် လာုကတယ်။ရန်ကုန် – အင်းစိန် လမ်းမ လညြ်းတန်း ကားမတ်ြတိုင် အလနြ် ရောက်တဲ့ အခၝ မြာတော့ လမ်းလ္တွောက် ဆိံ္ဋူပ သူတေကြိုကံ့ဖြံႚနဲႚ စမြ်းအားရငြ် တေကြ ႟ိုင်းစိုင်းစြာ အုကမ်းဖက်္ဘပီး ကားတြေ ပေၞကို အဓမ္ထ ဆြဲတင်ရန် ဋ္ဌကြိးစာုးကတဲ့ အခၝ၊ မခံမရပ်ိုံင်တဲ့ ဘေးအနီးနားရြိူပည်သူလူထုက ဝင်ရောက် စက်ြဖက် ကယ်တင် ခဲ့လိုႚ ဆိံ္ဋ ဖော်ထုတ်သူ အခဵြိႚ လတြ်ေူမာက် သြားခဲ့ရ္ဘပီး၊ ရဲသိန်းနောင် (ခေဵာက်)၊ ကေဵာ်စိုးဝင်း (လြိင်ြသာယာ)၊ ဘိုဘိုဝင်းလိငြ် (ဒေၝပုံ)၊ သန်ႛဇင်ဦး (လိင်ြသာယာ)၊ အေိးိုံင် (အင်းစိန်) တိုႚ ၅ ဦး ဖမ်းဆီး ခေၞဆောင် သြာူးခင်း ခံခဲ့ရတယ်။ လညြ်းတန်း လမ်းဆုံမြာုကံ့ဖြံႚ အသင်းဝင်တြေ၊ စမြ်းအားရင်ြတြေ စတဲ့ တားဆီး သူတေနြဲႛ နောက်ထပ် လမ်းလ္တွောက် ဆိံ္ဋူပမယ့် လူတြေ ႟ုန်းရင်း ဆန်ခတ်ူဖစ်န္ဘေပီး ကားမတ်ြတိုင်က ခရီးသြာူးပည်သူတေကြ ဆိံ္ဋူပ သူတေကြို အားပေး နေတယ်လိုႚ မဵက်ူမင် တဦးကေူပာပၝတယ်။ုကံ့ဖြံႚနဲႚ စမြ်းအားရငြ် အမည်ခံ လူမိုက် ရမ်းကား တေရြဲႚ လူမဆန်စြာ အုကမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မြ ကနေ လတြ်ေူမာက်လာသူ မစုစုြေိံးနဲႚ အဖြဲႚ။ ဆိံ္ဋူပသူ တေကြို ထပ်မံ ဖမ်းဆီးမယ့် နောက်ထပ် ဒိုင်နာကား ၃ စီး အသင့် ရြိန္ဘေပီး၊ ဆိံ္ဋူပ သူတေကြို ဖမ်းဆီးဖိုႚ အသင့် စောင့်နေတဲ့ အရပ်ဝတ် တေကြ လညြ်းတန်း လမ်းဆုံပည်ူမန်မာ ကုန်တိုက်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တခဵြိႚနဲႚ ကားမတ်ြတိုင် တေမြာ ရြိနေတဲ့ အူပင် မော်တော်ဆိုင်ကယ် အစီး ၂၀ လောက်လည်း အဲဒီ အနီးတဝိုက် ရြိနေပၝတယ်။ လမ်းလ္တွောက် ဆိံ္ဋူပ သူတေကြို အာဏာပိုင် တေကြ အုကမ်းဖက် ဖမ်းဆီး နေစဉ် မူးမေ့ လဲကဵ သြားတဲ့ မစုစုြေိံးကို အနီးနားက လူတယောက်က ကားငြား္ဘပီး ဘားလမ်း (မဟာ ဗိံ္ဌလြ ပန်ူးခံလမ်း) က ဆေး႟ုံကို လိုက်ပိုႚ ပေးေုကာင်း မဵက်ူမင် တြေႚသူ တဦးကေူပာပၝတယ်။ ဆိံ္ဋူပသူ တေကြို အုကမ်းဖက် ဖမ်းဆီး္ဘပီး ကားပေၞ တင်နေတဲ့ အတကြ် “မတရားတာ မလုပ်နဲႚ” လိုႚ အနားကနေ ဝိုင်းေူပာတဲူ့ပည်သူ ၂ ဦး ကိုလည်း အာဏာပိုင် တေကြ ဝိုင်းဝန်း ထိုးဋ္ဌကိတ်္ဘပီး ကားပေၞ ဆြဲတင် သြားတယ် လိုႚလည်း အဲဒီ မဵက်ူမင် သက်သေကေူပာပၝတယ်။ ဒၝ့အူပင် မင်္စတာ ဘရောင်း ကော်ဖီဆိုင် အပေၞထပ် ကဵရြငြ် ကေဵာင်းထဲက လူသုံးဦး ကိုလဲုကံ့ဖြံႚ တေကြ ဖမ်းဆီး သြားတယ်လိုႛ စုံစမ်း သိရြိ ရပၝတယ်။ ၁၁ နာရီ ခန်ႚမြာ အမဵြိးသား ဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵပြ် အဖြဲႚဝင် အမဵြိးသမီး တေဟြာ အပတ်စဉ် ဆောင်႟ကြ် နေကဵ အတိုင်း သံဃာတော် အပၝး (၂၀၀) ကို ဆမြ်းလောင်း လ္ဘြပီးနောက် ရန်ကုန်ေ႟တြိဂုံ စေတီ အနီးက မဟာဝိဇယ စေတီ နားရြိ ဘေးမဲ့ကန်ကို သြားရောက်္ဘပီး ငၝးစာ ကေဋ္ဋုးက ပၝတယ်။ ကုသိုလ်ူပဖြိုႚ သြားရောက် သူတြေ အနက် ကန်ူခံဝင်း ထဲကို ၅ ဦး ဝင်အ္ဘပီးမြာ ကန်တံခၝးစောင့်က တံခၝးကို ပိတ်လိုက်္ဘပီး ကဵန် ၅ ဦးကိုခံစည်း႟ိုးထဲ ဝင်ခငြ့် မူပဘြဲ တာူးမစ် တာေုကာင့် ရောက်ရာ နေရာ အသီးသီး ကပဲ ကောင်းမြ ကုသိုလ်ူပြ အမ္တွ ဝေုက ရပၝတယ်။ ကုသိုလ်ူပ္ဘြပီး အူပန်မြာ မတ်ြတမ်းတင် ဓာတ်ပုံ ႟ိုက်တဲ့ အဖြဲႚခဵပြ် အဖြဲႚဝင် ကိုဝင်းခိုင်နဲႚ ကိုအောင်ထူး တိုႚကိုကံ့ဖြံႚ အသင်းသား တေနြဲႚ ထောက်လမြ်းရေးလိုႚ ယူဆ ရသူ တေကြ ကားပေၞ တင်္ဘပီး ဖမ်းဆီး ခေၞဆောင် သြားတယ်လိုႚ ဗဟို အမဵြိးသမီး လုပ်ငန်း အဖြဲႚ တာဝန်ခံ ဒေၞအေးအေးမာကေူပာူပ ပၝတယ်။ (ဒီဗီဘြီ)
ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်နဲႛိုံင်ငံရေး အကဵဉ်းသား အားလုံး လတြ်ေူမာက်ရေး ဝတ်ူပြ ဆုတောင်းပြဲကို မိံ္ဈလေး္ဘမြိႚမြာ ဒီကနေႛ မနက်က လုပ်ဆောင် ခဲ့တယ်လိုႛ ကိုယ်တိုင် ပၝဝင်ခဲ့သူ ကိုဖိုးဇော်က အခုလိုေူပာူပ ပၝတယ်။ “အမဵြိးသား ဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵပြ် အထေထြေ အတငြ်းရေးမြး ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည် နဲႛတကြ ဦးတင်ဦး အပၝအဝင်၊ (၈၈) မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသား ကိုမင်းကိုိုံင်တိုႛ အပၝအဝင်ိုံင်ငံရေး အကဵဉ်းသား အားလုံး လတြ်ေူမာက်ဖိုႚ အတကြ် ကဵနော်တိုႛ ဒီနေႛ ငေတြောင်တိုက်၊ ရန်ကုန် ကေဵာင်းမြာူပလြုပ် ပၝတယ်။ အဲဒီကမြ တဆင့် ပေၝင်းလဲ တိုက်မြာ ကဵနော်တိုႚ ဝတ်ူပဆြု တောင်းပၝတယ်။” မိံ္ဈလေးတိုင်း မိတီဉလ္ဘာမြိႚနယ် အမဵြိးသား ဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵပြ် ကလဲ ဒီကနေႛ ဆမြ်းလောင်း လပြဲနဲႛ လမ်းလ္တွောက် ဆိံ္ဋူပပြဲူပလြုပ် ခဲ့တယ်လိုႚ သိရပၝတယ်။ အဖြဲႚခဵပြ် လတ်ြတော် ကိုယ်စားလယြ် ဒေၝက်တာ သိန်းလင်ြနဲႛ အတငြ်းရေးမြး ဒေၞူမင့်ူမင့်အေးတိုႛ ဦးဆောင်တဲ့ အဖြဲႚခဵပ်ြဝင် (၂၀) လောက်္ဘမြိႚတငြ်း လမ်းလ္တွောက် ဆိံ္ဋူပခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်။ ဒီအုကာင်း အပၝအဝင် မိတီဉလာ ခ႟ိုင် အတငြ်းက အဖြဲႚခဵပြ် ဝင်တြေ ဒီကနေႛူပလြုပ်တဲ့ လပ်ြရြားမြ တေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ဒေၞူမင့်ူမင့်အေးက အခုလိုေူပာူပပၝတယ်။ “ဒီနေႛ ကတော့ ကဵမတိုႛ အဂဿၝနေႛ လပ်ြရြားမြ ပေၝ့လေ။ ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည် လတြ်ေူမာက်ရေး ဆမြ်းလောင်းလပြဲ လုပ်တယ်။ လုပ်္ဘပီးတော့ ကဵမတိုႛ လူစု မိတာနဲႛ ဆမြ်းလောင်းပြဲဟာ ဆမြ်းလောင်းပြဲပဲ၊ တကယ့် တကယ်တော့ ဟိုဟာပေၝ့ ဆိံ္ဋူပ လမ်းလ္တွောက်မကြို လုပ်ခဵင်တဲ့ ဆိံ္ဋနဲႛ လုပ်ခဲ့တာပၝ။ အမန်ြကတော့ အဲဒီတာ့ ပထမ လမ်းမတော် ကန္ဘေပီးတော့ မီးပြိင့် ထောင့်ကို ရောက်တယ်။ မီးပြိင့် ကန္ဘေပီးတော့ နာရီစင် ဘက်ကို ဆက်လ္တွောက် ခဲ့္ဘပီးတော့ ရန်ကုန် – မိံ္ဈလေး လမ်းမဋ္ဌကီး ပေၞကနေ ဆက်လ္တွောက်တယ် ပေၝ့လေ။ ကားဝင်းဋ္ဌကီး ဘက်ကန္ဘေပီးတော့ စေဵး အရြေႚက ပတ်လမ်း ဘက်ကို ကဵမတိုႚ ခဵြိး္ဘပီးတော့ ဆက်လ္တွောက် လာတယ်။ အဲဒီတော့ ဆိုင်ကယ် တေနြဲႚ လိုက်္ဘပီးတော့ သတင်း ထောက်တာတြေ၊ သိရတာတောု့ကံ့ဖတြ် အဓိက ပေၝ့လေ။ုကံ့ဖတ်ြရယ် နောက်ထပ်က ဆိုင်ကယ် ပြဲစားတြေ နောက်ထပ် ပၝတယ်လိုႛ သိရတယ်။ ဓာတ်ပုံ႟ိုက် ယူတာတြေ၊ သတင်း ယူတာတြေ ရြိတယ်။ြေိာံက်ယက်ြမတြေ ကတော့ မရြိပၝဘူး။ ကဵမတိုႛ အေးအေးဆေးဆေးပဲ။ အားလုံး (၂) မိုင် နီးပၝးလောက် လ္တွောက်သလောက်ူဖစ်သြား တာပေၝ့လေ။ အဲဒီတော့ မိတီဉလာ အနေနဲႛ ကတော့ ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည် လတြ်ေူမာက်ရေးကို ဆက်လုပ်တယ်။ အဲလိုပဲ တောင်သာ မြာလဲ လုပ်တယ်။ ဝမ်းတငြ်း မြာလဲ ဆက်လုပ်တယ်။ သာစည်မြာ ဆိုလိုႛ ရြိရင်လဲ ကုက္ကိမြာ လုပ်တယ် ဆိုတာလေး ကဵမတိုႛ သတင်း ရရြိပၝတယ်။ ပေဵာ်ဘယြ် ဘက်မြာ လဲပဲ အစည်းအဝေး လုပ်တယ်။ အဲဒၝကိုြေိာံက်ယက်ြတာ ပေၝ့လေ။ လူတြေ အမဵားဋ္ဌကီးနဲႛ။ အဲဒၝ ကိုလဲ ကဵမတိုႛ သတင်း ရရြိ ပၝတယ်။”
ယနေႚ နေႚလည်ပိုင်းက စစ်တ္ဘြေမြိႚမြာ သံဃာတော်တေနြဲႚ ကိုရင် အပၝး ၂၀၀ ကေဵာ်ဟာ စီတန်း လညြ့်လည်္ဘပီး လောင်စာဆီ စေဵိးံနြ်းနဲႚ ကုန်စေဵိးံနြ်း တိုင်ူးမၟင့်မြ တေကြို ဆန်ႚကဵင် ကန်ႚကက်ြတဲ့ အနေနဲႚ လမ်းလ္တွောက် ဆိံ္ဋ ထုတ်ဖော် ခဲု့ကပၝတယ်။ သံဃာတော်တေနြဲႚ ကိုရင်တြေ အမဵားစု ပၝဝင်္ဘပီး၊ လူ တယောက်ိံစ်ြယောက်သာ ပၝဝင်တဲ့ ဒီဆိံ္ဋ ထုတ်ဖော် လမ်းလ္တွောက်ပြဲကို အာဏာပိုင် တေကြ စောင့်ုကည့်မြ တေသြာ လုပ်ခဲ့္ဘပီး တစုံတရာ အရေးယူ ဆောင်႟ကြ်ူခင်း မရြိဘူးလိုႚ ဆိံ္ဋူပပြဲမြာ ပၝဝင်တဲ့ သံဃာတော် တပၝးက မိန်ႚုကား ခဲ့ပၝတယ်။ (အဲန်အမ်ဂဵီ) ၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသား ခေၝင်းဆောင် တဦူးဖစ်သူ ကိုဌေ့းကယ် ခေတ္ဇ တိမ်းရြောင် နေတဲ့ နေရာကို စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင် တေကြ မနေႚညမြာ စီးနင်း ရြာဖြေ ခဲ့ပေမယ့် ကိုဌေ့းကယ် လတြ်ေူမာက် သြားပၝတယ်။ ရန်ကုန်္ဘမြိႚ တနေရာမြာ ပုန်းအောင်း နေတဲ့ ကိုဌေ့းကယ် အခဵိန်မီ လတြ်ေူမာက် သြားေုကာင်း ၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသား ခေၝင်းဆောင် ကိုလမြဵြိးနောင်က ဒီဗြီဘီကို အခု မနက် ၁၀ နာရီမြာေူပာပၝတယ်။ ကိုဌေ့းကယ် ထိုင်း –ူမန်မာ နယ်စပ်ဘက်ကို ထကြ်ေူပး တိမ်းရြောင် သြား္ဘပီူဖစ်ေုကာင်း ထက်ြပေၞ နေတဲ့ သတင်း တေဟြာ မြားယငြ်းေုကာင်း ကိုဌေ့းကယ်နဲႚ ဒီနေႚ မနက် အဆက်အသယြ် ရရြိတဲ့ ကိုလမြဵြိးနောင်ကေူပာပၝတယ်။ သူက “အဲဒၝ သတင်းမြားပၝ။ ကဵနော်တိုႚ တိုင်ပင် ဆုံူးဖတ်ခဵက် ခဵထား္ဘပီးသားပၝ။ ဒီလိုမဵြိး နယ်စပ် ဒေသဘက် ထကြ်ေူပး သြားဖိုႚ ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်မဵြိး မရြိပၝဘူး။ူပည်တငြ်းမြာ ရြိတဲ့ လပ်ြရြားမြ တေကြိုပဲ ဘယ်လို ဦးဆောင်မြ ပေးရ မလဲ ဆိုတာ ကဵနော်တိုႚ တိုင်ပင် ထား္ဘပီးသား၊ ဆုံူးဖတ်ခဵက် ခဵ္ဘပီးသား” လိုႚေူပာပၝတယ်။ လောင်စာဆီ စေဵိးံနြ်ူးပန်လ္တွော့ခဵရေး လူထု တောင်းဆို ဆိံ္ဋူပပြဲ တေကြို ဦးဆောင် ခဲ့သူတြေ အနက် တဦး အပၝအဝင်ူဖစ်တဲ့ ကိုဌေ့းကယ်ကိုမန်မာ စစ်အာဏာပိုင် တေကြ လိုက်လံ ရြာဖြေ န္ဘေပီး ကိုဌေ့းကယ်ရဲႚ ဓာတ်ပုံ တေကြိုဖန်ႚဝေ ထားပၝတယ်။ ၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားတြေ အပၝအဝင် လောင်စာဆီ စေဵိးံနြ်း ကဵဆင်းရေး ဆိံ္ဋူပ လပ်ြရြား နေသူ တေကြို အာဏာပိုင် တေကြ ဖမ်းဆီး ရြာဖြေ နေတဲ့ အူပင် သူတိုႚ တတြေ ရောက်ိုံင်မယ် ထင်တဲ့ ဘုန်းတော်ဋ္ဌကီး ကေဵာင်းတြေ မြာလည်း အာဏာပိုင် တေကြ လုံခြံရေး တင်းတင်ုးကပ်ုကပ် ခဵထားတယ်လိုႛ သံဃာ အသိုင်းအဝိုင်းကေူပာပၝတယ်။ အိတ်ခဵ်အိုင်ဗြီ အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာရငြ် တေကြို နေထိုင်ခငြ့် ပေးထားတဲ့ သဃဿန်းကဋ္ဋန်း္ဘမြိႚနယ်က မဂ္ဂင် ကေဵာင်းတိုက် အနီးတဝိုက်မြာ အရပ်ဝတ် ရဲတြေ၊ စမြ်းအားရငြ် အဖြဲႚ တေနြဲႚ လုံခံရြေး အထူး တင်ုးကပ် ထားတာ တြေႚရ တယ်လိုႚ အဲဒီ ကေဵာင်းတိုက်က သံဃာတော် တပၝးကေူပာပၝတယ်။ ၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားတြေ အပၝအဝင်္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆိံ္ဋူပ နေသူတြေ အပေၞ စစ်အစိုးရရဲႚ ဖမ်းဆီးမြ၊ အုကမ်းဖက်မြ တေကြို လက်တုံႚူပန် သြားမယ်လိုႚူမန်မိာိုံင်ငံ တငြ်းမြာ ဖြဲႚစည်း လပ်ြရြား နေတဲ့ မဵြိးခဵစ် လူငယ် တပ်ဦး အဖြဲႚက ဒီနေႚေုကညာခဵက် ထုတ်ူပန် ပၝတယ်။ူပည်သူတြေ ခံစား နေရတဲ့ အထေထြေ ဆင်းရဲုကပ်တည်းမြ ဘေးဆိုးဋ္ဌကီး ကနေ လတြ်ေူမာက်ဖိုႚ နည်းလမ်း မဵြိးစုံ ကဵင့်သုံး အေူဖရြာ သြားမယ်လိုႚေုကညာခဵက်မြာ ပၝရြိ ပၝတယ်။္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆိံ္ဋူပ ဖော်ထုတ် နေတာတြေ အပေၞ မတရား ဖြိံပ် ညၟဉ်းပမ်း ဖမ်းဆီးတဲ့ အဖြဲႚအစည်း အားလုံးကို ခေၝင်းငုံႚ မခံဘဲူပင်ူးပင်းထန်ထန် တုံႚူပန်မယ် လိုႚလည်း ပၝရြိ ပၝတယ်။ (ဒီဗီဘြီ) ဒီကနေႛုသဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေႛဟာ ဆိုရင် လန်ြခဲ့တဲ့ ၁၉ိံစြ်၊ ၁၉၈၈ ခိုံစြ် တုန်းက လူထု လပ်ြရြားမြ အတငြ်း ဗကသမဵား အဖြဲႚခဵပြ်ူဖစ်တဲ့ ဗမိာုိံင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကေဵာင်းသား သမဂ္ဂမဵား အဖြဲႚခဵပြ် ဆိုတာကို မင်းကိုိုိံင်၊ ကိုကိုဋ္ဌကီး၊ မိုးသီးဇန်ြတိုႚ ဦးဆောင်္ဘပီးတော့ ဖြဲႚစည်း ခဲ့တဲ့နေႚူဖစ်ပၝတယ်။ ဒၝနဲႛ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆိုသလိုပဲ ဗကသမဵား အဖြဲႚခဵပ်ြကိုပန်္ဘပီး ဖြဲႚစည်းတယ် ဆိုတဲ့ေုကညာခဵက် တစောင်လည်း ဒီကနေႛ ရန်ကုန်ကနေ ထက်ြလာပၝတယ်။ “ခေတ်အဆက်ဆက် ကေဵာင်းသား ညီအကိုတော် မဵား၏ သမိုင်းပေး တာဝန်ကို ပခုံးေူပာင်း ထမ်းဆောင် ရမည့် မိမိတိုႛ မဵြိးဆက်သစ် ကေဵာင်းသား မဵားသည် ရာဇဝင် အစဉ်အလာ ထနြ်းေူပာင် ခဲ့သည့် ဗမိာုိံင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကေဵာင်းသား သမဂ္ဂမဵား အဖြဲႚခဵပ်ြကို ယနေႛမြ စ၍ူပန်လည် စုစည်း လိုက်သည်။ ကေဵာင်းသား ရြိရင် ကေဵာင်းသား သမဂ္ဂ ရြိရမည်။” ဒီကနေႛုသဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေႛ ရက်စြဲနဲႛ ထုတ်ူပန် ခဲ့တဲ့ ဗကသမဵား အဖြဲႚခဵပြ် ဗဟို စည်း႟ုံးရေး ကော်မီတီရဲႚ ထုတ်ူပန်ခဵက်ကို ရန်ကုန်္ဘမြိႚက ကေဵာင်းသား တဦး ဖတ်ူပ ခဲ့တာပၝ။ “ကဵနော်တိုႛ ဗမာ တိုိံင်ငံလုံးက ကေဵာင်းတြေ အားလုံး၊ တက္ကသိုလ်တြေ အားလုံး၊ ကောလိပ်နဲႛ သိပဍ္ဎံတြေ အားလုံး ရြိသမ္တွ ကေဵာင်းတြေ အားလုံးကို ကဵနော် တိုႚဟာ အေူခခံ္ဘပီးတော့ ဖြဲႚစည်းဖိုႚ ရည်႟ယ်ြခဵက်လည်း ရြိပၝတယ်။ ဋ္ဌကြိးလည်း ဋ္ဌကြိးစား နေပၝတယ်။” လိုႚ ဗကသမဵား အဖြဲႚခဵပြ် ဗဟို စည်း႟ုံးရေး ကော်မီတီရဲႚေူပာခငြ့်ရသူ ကိုကေဵာ်ကိုကိုကေူပာုကား ခဲ့ပၝတယ်။ ဗကသမဵား အဖြဲႚခဵပြ်ူပန်လည် ဖြဲႚစည်းတယ် ဆိုတော့ တခဵိန်တုန်းက ၈၈ တုန်းက ရြိတဲ့ ကေဵာင်းသား သမဂ္ဂတြေ၊ ကေဵာင်းသား ခေၝင်းဆောင်တြေ အားလုံး ပၝဝင် ဖြဲႚစည်း ထားတဲ့ ၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားမဵား အဖြဲႚနဲႚရော ဘာကြာူခားလဲ၊ နောက် သူတိုႛနဲႛ ပတ်သက်လိုႚရော ဘယ်လို သဘော ထားရြိလဲ ဆိုတဲ့ အမေး ကိုတော့ “၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားမဵား အဖြဲႚ ကိုတော့ ကဵနော်တိုႚက လေးစားတယ်။ ရည်႟ယ်ြခဵက်တြေ၊ သူတိုႚရဲႚ ခံယူခဵက်တြေ အကုန်လုံးကို ကဵနော်တိုႚိံစ်ြသက် သဘော ကဵတယ်။ ကဵနော်တိုႚက သူတိုႚရဲႚ အစဉ်အလာကို ပခုံးေူပာင်း တာဝန် ယူထားတဲ့ ကေဵာင်းသား သမဂ္ဂူဖစ်ပၝတယ်။ သူတိုႚနဲႚ မပတ်သက် သော်ူငားလည်း သူတိုႚရဲႚ ခပ်ြဒေၝင်း စိတ်ဓာတ်ကို အ္ဘမဲတမ်း လေးစား နေမြာူဖစ်တယ်။” လိုႚ ကိုကေဵာ်ကိုကိုကူပန်လည်ေူဖုကား ခဲ့ပၝတယ်။ (ဗီအြိုအေ) ရဟန်းရင်ြလူပည်သူ အပေၝင်းသိုႛ ပန်ုကားခဵက်
(၂၀၀၇ ခိုံစြ်ုသဂုတ်လ ၂၆ ရက်) ၁။ ယနေႛ ခဵိန်ခၝတငြ် စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်မဵား ဘက်မြ ရဟန်း ရင်ြလူပည်သူ အပေၝင်း၏ စားဝတ် နေရေး ဆိုင်ရာ အခက်အခဲ အုကပ်အတည်း မဵားကို ငဲ့ကကြ် စဉ်းစား ထောက်ထား စာနာူခင်း မရြိဘဲ လောင်စာဆီ စေဵိးံနြ်းမဵား အဆမတန် တိုးမၟင့် လိုက်မြေုကာင့် နောက်ဆက်တြဲ ပေၞပေၝက် လာသည့် အထေထြေ ကုန်စေဵိးံနြ်ူးမင့်တက်မြိံငြ့် နိင်္စဓူဝ သြားလာ လပ်ြရြား နေရသော ခရီး စရိတ်မဵား ဋ္ဌကီူးမင့်မြ ဒဏ်ကို စစ်အစိုးရ အဆင့်ူမင့် အရာရြိဋ္ဌကီး မဵာိးံငြ့် ၎င်းတိုႛ လက်ဝေခံ ခၝးပိုက်ဆောင် ရေပေၞဆီ လူတန်းစား မဵားမြ အပ ကဵန် ရဟန်း ရင်ြလူပည်သူ အပေၝင်း အနေူဖင့် ခၝးသီးစြာုကြံတြေႚ ခံစားရလဵက် ရြိနေ ပေသည်။ ၂။ ရဟန်း ရင်ြလူပည်သူ အပေၝင်ုးကြံတြေႚ ခံစား နေရသော စားဝတ် နေရေး ဆိုင်ရာ အထေထြေ အခက်အခဲ အကဵပ်အတည်း မဵားကို အာဏာပိုင်မဵား ဘက်က လိုအပ်သလို အရေးယူ ဆောင်႟ကြ် ပေးရန် အတကြ် ၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားမဵား၊ လပ်ြရြား တက့်က သူမဵားကူပည်သူႚ အခငြ့်အရေိးံငြ့် အညီ ဆိံ္ဋ ထုတ်ဖော်ူပသမြ အူဖစ် လမ်းလ္တွောက် ဆိံ္ဋူပပြဲမဵာူးပလြုပ်ခဲ့မြ အပေၞ အာဏာပိုင်မဵား ဘက်က စမြ်းအားရငြ် အမည်ခံ တနပ်စား လူရမ်းကားမဵား အသုံူးပြ၍ အုကမ်းဖက် ဖမ်းဆီြးိံပ်ကပ်ြမမြဵာူးပလြုပ် လာခဲ့ သည်ကို ရဟန်း ရင်ြလူပည်သူ အပေၝင်း မဵက်ူမင် ကိုယ်တြေႚပင်ူဖစ်သည်။ ၃။ ထိုႛေုကာင့် ရဟန်း ရင်ြလူပည်သူ အပေၝင်း အနေူဖင့် မိမိတိုႛ ရင်ဆိုင်ုကြံတြေႚ ခံစား နေရသော စားဝတ် နေရေး ဆိုင်ရာ အထေထြေ အခက်အခဲ အုကပ်အတည်း မဵားကို အာဏာပိုင်မဵား ဘက်က လိုအပ် သလို အရေးယူ ဆောင်႟ကြ်ေူဖရငြ်း ပေးရန် အတကြ် လည်းကောင်း၊ ရဟန်း ရင်ြလူပည်သူ အပေၝင်း အငတ်ဘေးမြ လတြ်ေူမာက် စေရေး အတကြ် တိုက်ပြဲ ဝင်ခဲ့သော အဖမ်းဆီးခံ ၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားမဵာိးံငြ့် လပ်ြရြား တက့်ကသူမဵား ခဵက်ခဵင်း လတ်ြပေးရန် အတကြ် လည်းကောင်း အုကမ်းမဖက် လူထု တိုက်ပြဲကို အရြိန်ူမၟင့်၍ ဆက်လက် လုပ်ဆောင် သြားရမည်ူဖစ်ပၝသည်။ ၄။ အုကမ်းမဖက် လူထု တိုက်ပြဲ ကော်မတီ၏ အစီအစဉ်ူဖင့် ၂၀၀၇ ခိုံစြ်၊ုသဂုတ်လ ၃၁ ရက် ညနေ ၅ နာရီတငြ် ရန်ကုန်္ဘမြိႚူပည်လမ်ူးပည်သူႚ လတ်ြတော် အဆောက်အအုံရြေႚူပည်သူ ရင်ူပင် ကက်ြလပ် နေရာတငြ် မင်းဆိုး မင်းညစ် (ရာဇတောဝၝ) တိုႛ၏ ဘေး၊ လူမဆန်သော သူ (အမိုံင်္ံ) တိုႛ၏ ဘေး၊ အငတ်ဘေး တိုႛမြ ကင်းလတြ်ိုိံင်စေူခင်း အလိုႛငြာူပည်သူတိုႚ၏ ဆင်းရဲ ဒုက္ခကို ကယ်တင် စောင့်ရြောက်မည့် ရဟန်း သံဃာတော် မဵားက ပရိတ် တရားတော်မဵား ႟တ်ြဖတ်မည့် အူပင် မင်းကဵင့် တရား ဆယ်ပၝိးံငြ့် အညီ တိုင်းသူပည်သားမဵား အပေၞ အုပ်ခဵပြ် မင်းလုပ်ူခင်း မူပြိုိံင် ပၝက တိုင်ူးပည် ပဵက်တတ်ေုကာင်ူးမတ်စြာ ဘုရားရင်ြက ပသေနဒီ ကောသလ မင်းဋ္ဌကီးကို ဆုံးမ ဟောုကားတော် မူသည့် ရာဇော ဝၝဒသုတ် တရားတော် ကိုလည်း ဟောုကားမည်ူဖစ်ပၝ၍ ထိုဘေးရန် အပေၝင်းမြ ကင်းဝေး လိုသည့်ူပည်သူ အပေၝင်း အနေူဖင့် လမ်းလ္တွောက်္ဘပီး ပရိတ် တရားတော်မဵား လာရောက် နာယူုကပၝရန် လေးစားစြာူဖင့် ပန်ုကား အပ်ပၝသည်။ ၅။ူမန်မာူပည် တနံတလဵားရြိူပည်သူ အပေၝင်း အနေူဖင့်လည်း ထိုနေႛ ထိုရက် ထိုအခဵိန် (၂၀၀၇ခိုံစြ်၊ုသဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေႛ ညနေ ၅ နာရီ) တငြ် သက်ဆိုင်ရာ မိမိတိုႛ္ဘမြိႚနယ်မဵား အလိုက် ဆရာတော် သံဃာတော် မဵားကို ပင့်ဖိတ်္ဘပီး အလားတူ ပရိတ် တရားတော် နာယူ ပြဲမဵား ကဵင်းပူပလြုပ် သြာုးကပၝရန် တိုက်တနြ်ိးုိံးဆော် အပ်ပၝသည်။ အုကမ်းမဖက် လူထု တိုက်ပြဲ ကော်မတီ (မဇ႙ိမ)
မလေးရြားတငြ် ကဵင်းပနေတဲ့ မာဒေးကား ဘော်လုံး္ဘပိင်ြပြဲ အတငြ်ူးမန်မာက ဇင်ဘာဘေကြို ၃ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲႚိုံင်တဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ် ပြဲတငြ် ပိုစတာ တိုက်ပြဲ ဆင်ြိဲံနေသူမန်မာ မဵြိးခဵစ်မဵား။
ဆိံ္ဋူပသူ တေကြို မတရား ဖမ်းဆီးနေမြ အပေၞူပင်းထန်စြာ ႟တ်ြခဵတဲ့ေုကညာခဵက်ကို အမဵြိးသား ဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵပ်ြက မနေႚ ညနေဘက်က ထုတ်ူပန်ခဲ့္ဘပီး၊ ဒီေုကညာခဵက် ထဲမြာ ဒီလို အုကမ်းဖက် ဖမ်းဆီး နေမဟြာ ဗုဒ္ဌဘာသာ ယဉ်ကေဵးမြ နဲႛလဲ ဆန်ႛကဵင် နေတယ်၊ ဥပဒေနဲႛ မညီတဲ့ ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းနေတာူဖစ်လိုႛ ဒၝတေကြို ႟တ်ြခဵေုကာင်း ဖော်ူပ ထားပၝတယ်။ (ဒီဗီဘြီ)ူမန်မိာိုံင်ငံမြာ မုကာ သေးခင်ကူဖစ်ခဲ့တဲ့ ဖမ်းဆီးမြ တေဟြာ လူမြ အခငြ့်အရေး တေကြိုမန်မာ စစ်အစိုးရက လေးစား လိုက်နာမြ မရြိ တာကိုပသတဲ့ နောက်ထပ် နမူနာ တခုဖစ်တယ် ဆ္ဘိုပီး ဒိန်းမတ်ိုံင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီးကူပစ်တင် ႟ြံႚခဵ လိုက်ပၝတယ်။ူမန်မိာိုံင်ငံမြာ မုကာ သေးခင်ကူဖစ်ခဲ့တဲ့္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ လမ်းလ္တွောက် ဆိံ္ဋူပ သူတေကြိုမန်မာ စစ်အစိုးရက အုကမ်းဖက် ဖမ်းဆီြးိံပ်ကပြ် ခဲ့တာတြေ အပေၞ ဒိန်းမတ် အစိုးရကူပစ်တင် ႟ြံႚခဵေုကာင်း မနေႚက နေႚစြဲနဲႚ ထုတ်ူပန်တဲ့ေုကညာခဵက် ထဲမြာ ဒိန်းမတ်ိုံင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီးက အခုလိုေူပာထားတာူဖစ်ပၝတယ်။ (ဗီအြိုအေ)
ဆိံ္ဋူပသူ တဦးကိုကံ့ဖြံႚနဲႚ စမြ်းအားရငြ် အမည်ခံ လူမိုက် ရမ်းကား တေကြ လူမဆန်စြာ အုကမ်းဖက် ဖမ်းဆီး ခေၞဆောင် သြားစဉ်။ူမန်မိာုိံင်ငံမြာ အာဏာပိုင် တေကြ လောင်စာဆီ စေဵိးံနြ်းတြေ ႟ုတ်တရက် အဆမတန် တိုးမၟင့်လိုက်္ဘပီးတဲ့နောက်္ဘငိမ်း္ဘငိမ်းခဵမ်းခဵမ်း ဆိံ္ဋူပခဲု့က သူတေကြို ဥပဒေမဲ့ အုကမ်းဖက် ဖမ်းဆီြးိံမ်နင်း နေတဲ့ အတကြ် ကုလသမဂ္ဂ အဖြဲႚဋ္ဌကီးကုကားဝင် ဆောင်႟ကြ် ပေးဖိုႛ ITUC လိုႛ ခေၞတဲ့ အူပည်ူပည် ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား သမဂ္ဂမဵား အဖြဲႚခဵပ်ြက ကုလ သမဂ္ဂ အတငြ်းရေးမြးခဵပြ် မင်္စတာ ဘန်ကီမနြ်းထုံသဂုတ်လ ၂၇ ရက် မနေႛက စာရေးသား တောင်းဆို လိုက်ပၝတယ်၊၊ (အာရ်ဖက်အေ)
အတိုကောက် အမည်င်္အီနြ်း။ ၁။ ဒီဗီဘြီ – Democratic Voice of Burma (ဒီမိုကရက်တစ်ူမန်မာ့ အသံ)။ ၂။ ဗီအြိုအေ – Voice of America, Burmese Section (အမေရိကန် အသံ၊ူမန်မာပိုင်း အစီအစဉ်)။ ၃။ မဇ႙ိမ – မဇ႙ိမ အင်တာနက် သတင်းဌာန၊ူမန်မာ ကန်ြရက် စာမဵက်ြိာံမဵား။ ၄။ အာရ်ဖက်အေ – Radio Free Asia, Burmese Section (လတ်ြလပ်သော အာရြ အသံ၊ူမန်မာပိုင်း အစီအစဉ်)။ ၅။ အဲန်အမ်ဂဵီ – Network Media Group (သတင်ိးံငြ့် မီဒီယာ ကန်ြရက်)။ Like this:Like Loading...
Posted by maungyit on August 29, 2007 in Local News Headlines
←ူမန်မာူပည်အရေး တောင်းဆိုမဆြိံ္ဋူပပြဲ ဆန်ဖရန်စင်္စကိုတငြ်ူပလြုပ်	၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားလူငယ်မဵား – ၈ လေးလုံး Part 1 →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...
Recent Posts	Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity (9th September 2011)
100 The Anniversary of3Composers
88 Generation Students
8888 – 20 Years
8888 – 23 Years
Ashin Pyinna Nanda
Aung San of Burma
Aung Wa – Letters from Michigan
Aung Way – Revolution participants
Australia Burmese News
Khin Hnin Lwin
Ludu Daw Ah Mar – 93 Years – Special Edition
Student Movement in Burma
MoeMaKa’s Face	MoeMaKa’s Face
Beruma Games	Top Posts	Burmese Community and Burmese American Democratic Alliance celebrate DASSK 64 Event (Video Document)	Cartoon Maung Yit - Burmese Internet	Yadanabon newspaper	celebrity couple in Rangoon	Archives	September 2011 (104)
Top Clicksmoemaka.files.wordpress.c…moemaka.files.wordpress.c…moemaka.files.wordpress.c…moemaka.files.wordpress.c…moemaka.files.wordpress.c…moemaka.files.wordpress.c…moemaka.files.wordpress.c…moemaka.files.wordpress.c…moemaka.files.wordpress.c…moemaka.files.wordpress.c…Blog Stats	188,371 hits